Anastrozole vovony (120511-73-1) Mpanamboatra sy mpamatsy - Factory
Anastrozole dia ampiasaina hanasitranana kanseran'ny nono amin'ny vehivavy aorian'ny taona. Ny kanseran'ny nono dia natao haingana kokoa amin'ny hormone voajanahary antsoina hoe estrogen. Ny anastrozole dia mampihena ny habetsan'ny estrogen ny vatana ary manampy amin'ny fampihenana na hampihenana ny fitomboan'ny kanseran'ny nono.
Row Anastrozole vovoka (120511-73-1) video
Raw Anastrozole vovoka (120511-73-1) Description
Raw Anastrozole vovoka, anarana marika dia Arimidex. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana hafa, toy ny fandidiana na ny taratra, mba hanasitranana ny homamiadana vao haingana amin'ny vehivavy izay niaina ny fihanaky ny taolana (fiovan'ny fiainana, faran'ny vanim-potoana isam-bolana). Ity fanafody ity koa dia ampiasaina amin'ny vehivavy, izay niaina taonan'ny menopause, ho fitsaboana kanseran'ny nono izay niparitaka tao anaty tratra na tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny vatana. Ity fanafody ity koa dia ampiasaina mba hanasitranana ny homamiadan'ny vozon'ny vehivavy voan'ny kanseran'ny nono taorian'ny nahazoana tamoxifen (Nolvadex). Ny vovo-dronono Anastrozole Raw dia ao anatin'ny kilasy iray misy fanafody antsoina hoe tohibitors aromatase tsy misy endriny. Miasa amin'ny fampihenana ny habetsan'ny estrogen ny vatana. Izany dia mety hampiadana na hampiato ny fitomboan'ny karazana sela avy amin'ny sela izay mila estrogen mba hitombo.
Ny vovon-tsolika Rano Anastrozole dia fitaovana mahery sy tsy azo tsinontsinoavina aromatase manondro ny fitsaboana kanseran'ny nono any amin'ny vehivavy menopausal izay misy fivoaran'ny aretina manaraka ny fitsaboana tamoxifen. Ny kanseran'ny tratra maro dia manana mpikatroka estrogen ary ny fitomboan'ireto tumors ireto dia mety hamporisihan'ny estrogens. Ao amin'ny vehivavy menavava, ny loharanon-tsarim-pandrindrana (estradiol voalohany indrindra) dia ny fiovan'ny androstenedione miteraka adinôma amin'ny alàlan'ny aromatase amin'ny tavy peripheral, toy ny tavy mitroka, miaraka amin'ny fiovan'ny estrone amin'ny estradiol. Maro ny kanseran'ny nono dia misy aromatasina; Tsy azo antoka ny maha-zava-dehibe ny fitsaboana voajanahary. Ny fitsaboana ny homamiadan'ny nono dia nampiditra ny ezaka hampihenana ny haavon'ny estrogen amin'ny alàlan'ny ovariectomy sy ny fampiasana ny anti-estrogens sy ny mpandinika indrindra ny prôgrestation na eo an-dalam-pandrosoana na eo amin'ny menopause, ary ireo fitsabahana ireo dia mitarika ny fihenanam-pandrefesana na ny fivoaran'ny fivontosan'ny vehivavy sasany. Ny vovobony Rano Anastrozole dia fitaovana mahery sy tsy azo anaovana sela aromatase. Mampihena ny tsiranoka amin'ny sera estradiol izy io ary tsy misy vokany mahatsikaiky amin'ny fampiroboroboana kortikosteroids na aldosterone.
Rano anastrozole roah (120511-73-1) Specifications
Product Name Row Anastrozole vovoka
Anarana simika ICI-D-1033;ARIMIDEX;1-[3,5-DI-(1-METHYL-1-CYANO)-ETHYL]-BENZYL-1,2,4-TRIAZOLE, Anastrozol
Drug Class tsindrona aromatase tsy steroid
molekiolan'ny Formula C17H19N5
molekiolan'ny Wvalo 293.374 g / mol
mitsonika Point 130.14 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 50 ora
Solubility rano madinika 0.5 mg / ml
Application Ho an'ny fitsaboana adjuvant ho an'ny hormone receptor kanseran'ny nono, ary koa ny fitsaboana hormona ny kanseran'ny nono any amin'ny vehivavy-vehivavy. Nampiasaina koa izy mba hanasitranana ny gnecomastia pubertal sy ny sendika McCune-Albright.
Inona no atao hoe vovobony Rano Anastrozole (120511-73-1)?
Anastrozole dia tohiba aromatase tsy misy asterôma, izay manakana ny fampiasana ny estrogen amin'ny vehivavy ao an-tokantrano ary ampiasaina ho fitsaboana ny homamiadan'ny tsindrona estrogen. Anastrozole dia mifandraika amin'ny tahan'ny tsiranoka tsiranoka amin'ny serôma mandritra ny fitsaboana sy ny tranga tsy fahita firy amin'ny aretim-pivalanana.
Ahoana ny fomba famonoana raozy anastrozole (120511-73-1) asa
Ny anastrozole dia miasa amin'ny fampihenana ny habetsan'ny estrogen vita ao amin'ny vatana.
Ny kanseran'ny nono dia entina haniry amin'ny hormona estrogen. Ireo no fantatra amin'ny hoe estrogen receptor positive or ER + kanseran'ny nono.
Anastrozole dia anisan'ny andian-jiolahy antsoina hoe tohiba aromatase.
Rà ny anastrozole roah (120511-73-1) Dosage
Ny doka ARIMIDEX dia takelaka 1 mg iray indray mandeha isan'andro. Ho an'ny marary izay voan'ny kanseran'ny nono, ny ARIMIDEX dia tokony hitohy mandra-pivoaran'ny fivontosana. ARIMIDEX azo alaina na tsy misy sakafo.
Ho an'ny fitsaboana adjuvant ny homamiadana vao haingana ao amin'ny vehivavy menavava, dia tsy fantatra ny fomba fitsaboana tsara indrindra. Nandritra ny fitsarana ATAC dia notohanana nandritra ny dimy taona ny ARIMIDEX.
Tsy ilaina ny fanitsiana dosia ilaina amin'ny marary miteraka aretina na ny marary zokiolona.
Rano anastrozole roah (120511-73-1) soa
Ny fandinihana nataon'ny ATAC dia nahatsikaritra fa ny 5 taona Arimidex dia tsara kokoa noho ny 5 taona tamoxifen ho fitsaboana hormona voalohany ho an'ny vehivavy menavava miaraka amin'ny homamiadan'ny nono, hormone-receptor-positive. Arimidex dia tsara kokoa noho ny tamoxifen amin'ny:
Buy Anastrozole vapor (120511-73-1) avy amin'ny Buyaas.com